OEM Izikhungo - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Ilebuli yangasese (insizakalo ye-OEM) ingenye yezindlela ezithandwayo ezisakazeka lapha namuhla! Futhi, ngubani ongachaza kangcono ngayo? Wena! Lapho ungumkhiqizo omuhle kakhulu kaNkulunkulu, kungani uzithengisa komunye? Ufanelwe insizakalo ekhethekile futhi iVannova iyisincomo esihle kakhulu sokwakha izinkophe zelebula langasese zebhizinisi lakho.
i-eyelashes label yangasese (isevisi ye-OEM)
Kuyinto engenakuphikiswa ukuthi ukufakwa kwelebula langasese lelebuli kubalulekile kumkhiqizo, ngakho-ke uma ubambisana nathi, sikusiza ukuthi wakhe iphakethe eliphoqelela neligqame kakhulu. Itimu yokuklama ekhethekile iqinisekisa ukupakishwa okubucayi kuwe, futhi insizakalo yethu yokuklama imahhala nge-oda lakho ngobuningi. Ukupakisha kwethu kuthokozela ikhwalithi ephezulu ngoba yonke le miklamo isebenzisa imfashini yesimanje njengereferensi futhi sinobudlelwano obusondelene nobunye bokusebenzisana nezitshalo eziningi zokupakisha nezimboni zokuphrinta ezakha isigaba sokuqala samanje sasekhaya, ukumiswa kwezingxenyekazi zakwamanye amazwe okuhamba phambili nokukwazi ukukhiqiza izinto zokupakisha iminyaka eminingi.
Ilebheli yangasese ye-eyelash extensions ilebula yangasese Silawula izinhlobo eziningi zezandiso zelebuli yangasese nezitayela zokupakisha ze-eyelash futhi ungakhetha noma yini oyithandayo, Uma lungekho uhlobo lomusa wakho, ungatshela imininingwane ethile ukuze uchaze okuthandayo, futhi abaculi bethu bokuqhafaza bazophuma endleleni yabo yokwakha uhlelo lwenkambiso olusebenzela inkampani yakho. Siqinisekisa ikhwalithi futhi sinikela ngensizakalo ethokozisayo ngemuva kokuthengisa kwayo yonke into esiyithengisile. Sisize amaklayenti amaningi ukuthi ahlele impumelelo yawo futhi sizonikezela ngemisebenzi yethu ngemizamo yethu yonke. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, ithimba lethu lilungele ukusebenza nawe.
Inqubo Yelebula Elizimele
(1) Okokuqala, udinga ukuqinisekisa i-oda ngobuningi;
(2) Bese usitshele uhlobo lwamaphakeji owafunayo nemibono yomklamo owuthandayo, sizohambisa imfuneko sakho kubaculi bethu bokuqhafaza bese sihlela ukwakhiwa;
(3) Sizoba nezinhlelo zokuklama okungenani ezi-3 zesithenjwa sakho. Khetha engcono kakhulu oyithandayo bese usitshele uma udinga ukulungiswa okuthile;
(4) Sizothumela umklamo obuyekeziwe ukuqinisekisa nawe;
(5) Uma unelisekile, sizokwenza ifayili lokuphrinta lefektri yokuphrinta ngemuva kokuhlolwa kathathu. Ifektri yokuphrinta izoqinisekisa futhi ihlele ukukhiqizwa kwenqwaba;
(6) Sithola ibhokisi lokugcina lokuqhuma bese sipakisha ngemivimbo yakho, bese sikuthumela kuwe.